Mikasika anay – Hakanto Contemporary (MG)
Teraka tamin’ny taona 1977 tao Antanananarivo, Madagasikara izy ary miaina sy miasa mivezivezy anelanelan’i Parisy sy Antananarivo
Joël Andrianomearisoa no mpitantana ara-java-kanto sy mpitahiry ny zava-kanto ao amin’ny Hakanto Contemporary. Nanomboka ny fotoana nisokafany ny volana febroary 2020, manambatra ny maha mpanakanto azy sy mpanohana ny fanandratana ny kolontsaina sy ny kanton’ny Madagasikara eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena. Nitondra ny voninahitr’ i Madagasikara tamin’ny 58ème Biennale de Venise 2019 izy ary efa naneho ny sangan’asany tamin’ny toerana fampirantiana lehibe maro eo anivon’izao tontolo izao, MAXXI ao Roma, ny Hamburger Bahniof ao Berlin, ny Smithsonian National Museum of African Art ao Washington DC ary ny Centre Pompidou ao Paris. Nanohana sy nanorina ny 30 et Presque-Songes (2007, 2011) ihany koa izy, tetik’asa sy fandaharana, taranja mifangaro natokana hanandratana ny zava-kanto nosoratan’ilay poeta Malagasy Jean-Joseph Rabearivelo ary niara niasa tamin’ny fanatontosana ny Festival de danse Sanga (2003) sy Festival Photoana (2005).
Ny Fonds Yavarhoussen dia fandraisana andraikitra, hevitr’i Hasnaine Yavarhoussen, Tale Jerenaly ny Groupe Filatex izay ahitana orinasa mpamokatra angovo, orinasa akaf’haba, orinasa mpanorina ary mpanangana foto-drafitr’asa.
Niforona tamin’ny taona 2019 ny Fonds Yavarhoussen ary maniry ny hampiroborobo ny sehatry ny kanton’ny vanim-potoana ankehitriny Malagasy, ny kolontsaina miavaka ao Madagasikara eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena.
Fitrandrahana, fanohanana, fiarahana hanorina ny ho avy, fanomezan-danja ny famoronana sy ny fivoarana Malagasy no anisan’ny tanjona voafaritra.